Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Retail, Wholesale အလုပ်အကိုင်များ
လက်လီ, လက်ကားရောင်းဝယ်ရေး Jobs in Myanmar
လက်လီ, လက်ကားရောင်းဝယ်ရေး အလုပ် 66 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
ရန်ကုန်၊မန္တလေးရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် လက်လီ, လက်ကားရောင်းဝယ်ရေး ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများကို Alote Myanmar တွင်ဝင်ရောက်ရှာဖွေလျှောက်ထားလိုက်ပါ။
BKB Baby & Toys Center
၁။ တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ ၂။ ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ၃။ Retail , Supermarket Field တွင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ ၄။ Inventory Software အသုံးပြုနိုင်ရပါမည်။ ၅။ တာဝန်ကျသည့် မည်သည့်နေရာမဆို သွားရောက်နိုင်ရမည်။ ၆။ ပေးအပ်ထားသောတာဝန်ဝတ္တရားများအား ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရပါမည်။
BKB Baby & Toys Center company is looking for Purchasing Clerk positions.
အကျိုးအမြတ်: - Performanceပေါ်မူတည်သောဆုကြေးများရှိမည်။
Inventory Leader (Male)
ပစ္စည်းစာရင်းကိုင် | Stock, Inventory Control
RK Yangon Steel Co.,Ltd.
-Raw/product layout & Deliveryနှင့်ပတ်သတ်၍အနည်းဆုံးလုပ်သက် ၃နှစ် ရှိသူဦးစားပေးမည်။ -GI products(Coils, Sheet, Pipes) နှင့်ပတ်သတ်၍အတွေ့ကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ -Fork-lift truck, Overhead cranes, safe work procedureနှင့်ပတ်သတ်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိသူအားဦးစားပေးမည်။
အလှပြင်ဆရာ | Beautician
- Beauty Product နှင့် Skin Care knowledge အခြေခံရှိရမည်။ - အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး အများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - သွက်သွက်လက်လက်ရှိပြီး Customer Service ကောင်းမွန်စွာပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Operation Staff (E-Commerce)
A/R, A/P နှင့် အခြား Accounting ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လုပ်ဆောင်ရမည်။ KhitZay partners (Suppliers, 3PLS, etc..) တို့နှင့်သက်ဆိုင်သော Payable and receiveable Income and Expenses များကို Manage ပြုလုပ်ခြင်း။ 3rd party service providers ( vendor selection and monthly review of payments versus activity) များကို Manage ပြုလုပ်ခြင်း။ Financial data and operations budgets များကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း။ English Version Manage all accounting operations including invoice managements, A/R, A/P. Manage all payable and receiveable Income and Expenses Management from all KhitZay partners (Suppliers, 3PLS, etc..) Manage and coordinate end to end audits of 3rd party service providers, including vendor selection and monthly review of payments versus activity. Analyzing financial data and preparing operations budgets.
-Local Market/online တွင် purchaser အဖြစ်လုပ်သက် 2နှစ် နှင့်အထက် လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ -စက်ရုံနေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများနှင့်စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပတ်သတ်သော knowledgeရှိရမည်။ -ပစ္စည်းများဝယ်ရမည့်‌နေရာများသို့သွားရောက်ဝယ်ယူနိုင်ရန် ကားမောင်းတတ်ရမည်(သို့မဟုတ်) ဆိုင်များအားကောင်းမွန်စွာသိရမည်။ - Supplier များ၏အချက်အလက်များကိုonlineတွင်လည်းရှာတတ်ရမည်။
-နေ့စဉ် Customer များထံဖုန်းဆက်၍ Order ကောက်ရန် -Weekly Sale Report များကို Sale Admin သို့ ပေးရန် -နေ့စဉ် Customer List Update ပြုလုပ်ရန် -ပစ္စည်းများပေးပို့ပြီးထားကြောင်း Customer များထံဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားရန် -Beauty Advisor များထံ နေ့စဉ်ဖုန်းဆက်၍ Attendance စစ်ဆေးရန်
Stock Control (Assistant)
BKB Baby & Toys Center is looking for Stock Control (Assistant) positions.
🔹ကန်ထရိုက်တာများအား ကြီးကြပ်ခြင်း။ 🔹Site များတွင် ညွှန်ကြားစီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။ 🔹Site များအတွက် လိုအပ်သော Survey များ ကောက်ခြင်း။ 🔹ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင်းနှင့် ပါတ်သတ်သော Material Design များ Plan ရေးဆွဲခြင်း။ 🔹Site များတွင် လိုအပ်သော data အချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်း။ 🔹နေ့စဥ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့် လုပ်ငန်းများအား Daily Report တင်ပေးခြင်း။
- BE or B.TECH or AGTI (MECH) ဘွဲ့ တစ်ခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ -Factory Maintenanceနှင့်ပတ်သတ်ပြီးလုပ်သက်အနည်းဆုံး ၁နှစ် ရှိရမည်။ -Mechanical Parts' specification များနှင့်ပတ်သတ်သော knowledge ရှိရမည်။ - Machining Process & material properties, Industrial Safety, 5S and KAIZENနှင့်ပတ်သတ်သော knowledgeရှိရမည်။
ICB Company Limited
တက်ဘလက်ကွန်ပြူတာများ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြုတ်ထုတ်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်းနှင့် ချို့ယွင်းချက်များကို ပြုပြင်နိုင်ခြင်း။ Android နှင့် Windows လည်ပတ်မှုစနစ်အင်္ဂါရပ်များ၊ ကန့်သတ်ချက်များကို အသိပညာရှိရမည်။ အီလက်ထရွန်းနစ် ဆားကစ်ဘုတ်များ၊ ပရိုဆက်ဆာများ၊ ချစ်ပ်များနှင့် ကွန်ပျူတာ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တို့ကို တတ်ကျွမ်းရမည်။ ဖောက်သည်တောင်းဆိုမှုများ၊ တိုင်ကြားမှုများနှင့် ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြုပြင်ခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖောက်သည်အချက်အလက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းလမ်းဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်း။
အကျိုးအမြတ်: စွမ်းဆောင်ရည် အတွက် ဆုလာဘ် များ
🔹Sale Staff များအား ကြီးကြပ်ညွှန်ကြား၊ သင်ကြားပေးခြင်း။ 🔹Sale Department ၏ Monthly Budget ရေးဆွဲခြင်း။ 🔹Customer Type များအား ကျွမ်းကျင်နားလည်၍ complaint များအား ကောင်းစွာဖြေရှင်းပေးခြင်း။ 🔹အရောင်းမြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းများ စီမံ ဆောင်ရွက်ခြင်း။ 🔹Sale Staff များ၏ Daily Report ကိုစစ်ဆေးပြီး KPIတွက်ချက်ခြင်း။ 🔹Company မှ ချမှတ်ထားသည့် policy and Procedure အတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်များ တင်ပြဆွေးနွေးခြင်း။
KanHtoo San Food Distribution
KanHtoo San Food Distribution is looking for sale positions.
အကျိုးအမြတ်: Commision provided
🔹Plumbing System, Electrical System, Generator နှင့် Air Con System များအား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား စီမံကြီးကြပ်ခြင်း။ 🔹အသုံးပြုနေသော System များအား ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း။ 🔹ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စရိတ်များကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်း။ 🔹ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် Schedule များ ရေးဆွဲထားခြင်းနှင့် Budget Plan များ ရေးဆွဲထားခြင်း။ 🔹နေ့စဥ် လုပ်ငန်းစဉ်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် Daily Report များ တင်ပြခြင်း။
BKB Baby & Toys Center is looking for Warehouse Trainnes positions.
မုန့်ထုပ်ဝန်ထမ်း (မ ၅ဦး)
မုန့်ထုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် အလုပ်သမားအလိုရှိပါသည်။ (မ-၅ဦး) အလုပ်ချိန်။ ။ (၈:၀၀)နာရီ မှ (၅:၃၀)နာရီ သတ်မှတ်ထားသော အရည်အတွက်ကို ပြည့်မှီအောင်ထုတ်နိုင်ရပါမည်။
Service Technician (Mobile Phone)
New Technology များ လေ့လာပြီး Software/ Hardware ပြသနာများအား တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးရမည်။ Internal Control Procedure အား လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
Zillion Icon Company
- Zillion Icon Company လက်အောက်ရှိ Ripples Shoes & Bags , Soon Fashion, Papillon Fashion အတွက် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ရမည်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - LCCI Level3အောင်မြင်ပြီး Account ရာထူးဖြင့်အနည်းဆုံးလုပ်သက် ၂ နှစ်အထက်ရှိရမည်။
-တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည် - အသက်(၂၃)နှစ်မှ (၃၀)အတွင်း ဖြစ်ရမည် - computer ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည် - အရောင်းပိုင်းတွင် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ပြီး Retail Industry တွင် အနည်းဆုံးလုပ်သက် (၂)နှစ် ရှိရမည် - ၀န်ထမ်းများကို ကောင်းမွန်စွာ ဦးဆောင်ပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည် - ေငွကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကောင်းစွာနားလည်နိုင်သူဖြစ်ရမည်
Warehouse Helper (Mandalay)
- စတိုးဆိုင္ေရာင္းေသာပစၥည္းကို ဂိုေဒါင္မွထုတ္ေပးရန္။ - အတေြ႔အၾကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။ - စည္းကမ္းလိုက္နာျပီးေရရွည္လုပ္ကိုင္နိုင္သူမ်ားေလ်ွာက္ထားနိုင္သည္။ - အလုပ္ခ်ိန္ မနက္၉- ညနေ၆ - တစ္ပတ္ ၁ရက္နားရက္
အကျိုးအမြတ်: - လုပ္သက္ ၁နွစ္ျပည့္ျပီးပါက လုပ္သက္ေၾကးခံစားခ ြင့္ရွိသည္ - ယူနွီေဖာင္းေပးသည္ - အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ နားရမည္
Logistics Helper (Mandalay)
- ဆိုင္တစ္ဆိုင္ခ်င္းစီသို႔ ပစၥည္းပို႔ရန္ - ပစၥည္းအတင္အခ်လုပ္ရန္ - အမ်ားနွင့္တ ြဲ၍ လုပ္ကိုင္ရမည္ - စည္းကမ္းလိုက္နာ၍ ေရရွည္လုပ္ကိုင္နိုင္ရမည္။
အကျိုးအမြတ်: - လုပ္သက္တစ္ႏွစ္ျပည့္ပါက လုပ္သက္ေၾကးခံစားခ ြင့္ရွိသည္
Junior Supervisor(Line Leader)
- BE or B.TECH or AGTI ဘွဲ့ တစ်ခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည် - GI Pipe forming ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ ၂နှစ်လုပ်သက်ရှိရမည် -GI pipe(coils)ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်သည့် အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ -JIS product, Overhead cranes, safe work procedureနှင့်ပတ်သတ်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိသူအားဦးစားပေးမည်။
Brand Supervisor (Female)
- Zillion Icon Company လက်အောက်ရှိ Ripples Shoes & Bags , Soon Fashion, Papillon Fashion အတွက် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ရမည်။ - Fashion ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Supervisor အ​တွေ့အကြုံ (3) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - အရောင်းပိုင်း၊ ဝန်ထမ်းအုပ်ချုပ်မှု၊ stock ပိုင်းများကို ကျွမ်းကျင်စွာ manage လုပ်နိုင်ရမည်။ - စိတ်ကူးကောင်းပြီး ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ရှိရမည်။